Mariela Carril | | လမ်းပြ, ဂျပန်
ဂျပန် သူ့မှာဓလေ့ထုံးစံတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်အရစကားပြောဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ငါထင်တယ်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုဂျပန်ရိုးရာ။ ကမ္ဘာ၏ဤအခြမ်းတွင်နှစ်ကုန်သည်ခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဂျပန်သည်ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါ။
ဦး ဆုံးပြောရမယ် နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားများသည်ဂျပန်အားလပ်ရက်များတွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကိုခေါ်သည် shogatsu ယေဘူယျအားဖြင့်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အကြားရက်အနည်းငယ်အတွင်းမိသားစုများအတူတကွစုဝေးကြပြီးစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံအများစုသည်မျက်မမြင်များကိုဆွဲဆောင်သည်။
အနောက်တိုင်းတွင်အတော်အတန်ရှုံးနိမ့်သွားသောဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည် နှစ်ကုန်ကတ်များပို့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဖုန်းခေါ် nenga, ဒါပေမယ့်ဒီမှာနေဆဲအလွန်လူကြိုက်များသည်။ သူတို့ကိုသင်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်တစ်ခုမတိုင်မီပေးပို့ရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ကဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တည်းတွင်ပင်သူတို့ရောက်ရှိလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အာရှစိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နှစ်ဟာနှစ်စဉ်အတိတ်ကာလဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ၊ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ၊ လိုအပ်သောကတိက ၀ တ်များရှိသည်။ ယခုနှစ်မကုန်မီတွင် နှုတ်ဆက်ပါတီများသို့မဟုတ် bonenkai.
အိမ်များနှင့်ဆိုင်များကိုအလှဆင်ထားသည် ၀ ါး၊ ထင်းရှူးပင်နှင့်ချယ်ရီပင်များဖြင့်အိမ်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်။ အဝတ်အစားများ၊ အရာအားလုံးသည်အသစ်ဖြစ်ရမည်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင်အချို့ရှိပါသည် ရိုးရာဖြစ်ကြောင်းဟင်းလျာများ အဆိုပါအဖြစ် toshikoshi soba ဒါမှမဟုတ်ဂျုံခေါက်ဆွဲ ကြောင်းအသက်ရှည်သင်္ကေတ။ အခြားအစဉ်အလာဟင်းလျာများဖြစ်ကြသည် otoso ချိုသောစပျစ်ရည်ကိုဘာလဲ ဦး အိုဇုန်းလွှာmochi နှင့်အတူဟင်းချို။ ဒါဟာအစလုပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသည် o-sechi ryoriမတူကွဲပြားသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောညစာ၊
အဲဒီညပဲ လူများသည် 12 ပတ်လည်ရှိဘုရားကျောင်းကိုလာရောက်ကြသည် ထိုသို့လည်းတွေ့ဆုံသို့မဟုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပါတီများကိုရေတွက်ရန်၊ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ညသန်းခေါင်မှာခေါ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာတခါတရံ ၁၀၈ ကြိမ်မြည်တယ် ရတနာအဘယ်သူမျှမကိန်း။ ဤအရေအတွက်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာအရလူတို့၏ဆန္ဒများကိုကိုယ်စားပြုပြီးရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအပျက်သဘောဆောင်သောခံစားချက်များကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်နေထိုင်သူများသည်များသောအားဖြင့်ခေါ်သောဂီတပွဲနှင့်ညှိရသည် kohaku uta gassenj-pop ခညျြအနှောအတူ။ အခြားအချိန်များတွင်ဂိမ်းကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောဂိမ်းများရှိသည် hanetsukiဂျပန်ကြက်တောင် စွန်ပျံသန်းဖို့ သို့မဟုတ် takoage သို့မဟုတ် karuta ကဲ့သို့ကဒ်ဂိမ်းများ။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့နည်းနည်းအသုံးပြုမှုထဲကပါပြီ။
နေ့ ဇန်နဝါရီလ 1နှစ်သစ်ကူး၏တရားဝင်စတင်ခြင်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ပြည့်နေသောနေ့ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလက်ခံရရှိရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ရပ်ဖြစ်သည် နေထွက်ကြည့်ဖို့နေပါ။ ယခုနှစ်ပထမနေထွက်ခြင်းကိုခေါ်သည် hatsu-hinodeထိုနေ့ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည် The ဗိမာန်တော်, hatsumode သွားရောက်ကြည့်ရှုဒီခရီးစဉ်မှာလည်းရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရအမျိုးသမီးတွေကဒီခရီးစဉ်မှာကီမိုနိုဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ တိုကျိုတွင်လူကြိုက်များသောဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သည်မေဂျီဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃ ရက်တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒီအတောအတွင်းမှာတောင်ဒီသန့်ရှင်းရာဌာနဟာလူတွေနဲ့ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။
ဤဘုရားကျောင်းများနှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနများရှိလေထုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်ဤရက်စွဲများကိုသွားလျှင်သင်၌အချိန်များစွာရလိမ့်မည်။ ရှိပါတယ် အစားအစာဆိုင်ခန်းများ၊ လူများကံကောင်းခြင်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း။ အေးဆေးအေးဆေးနေတယ် တိုကျိုတွင် Meiji ဘုရားကျောင်း၊ ကျိုတိုတွင် Fushimi Inari Taisha၊ အိုဆာကာတွင် Sumiyoshi Taisha နှင့် Kamakura တွင် Tsuruoka Hachimangu ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လူကြိုက်များသောနေရာများ ဖြစ်၍ ပုံမှန်အတိုင်းဆုတောင်းရန်အဓိကခန်းမသို့ရောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
El ဇန်နဝါရီလ2အစဉ်အလာကဖော်ပြသည် တိုကျိုရှိperကရာဇ်နန်းတော်၌appearanceကရာဇ်သည်လူအများရှေ့တွင်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပြီး၊ နန်းတော်အတွင်းရှိဥယျာဉ်များကိုအများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှစ်ခုရှိသည်။ နှစ်သစ်တွင်နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာ၏မွေးနေ့အပေါ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူအများတို့သည်များသောအားဖြင့်နန်းတော်သို့approachကရာဇ်နှင့်သူ၏မိသားစုသည်နံနက် ၁၀ နာရီမှမွန်းလွဲ ၁း၀၀ မွန်းလွဲ ၂ နာရီမပြည့်မှီသံချပ်ကာဖန်နောက်ကွယ်မှလသာဆောင်ပေါ်သို့ရောက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
နှစ်သစ်သည်လည်းအချိန်ကောင်းဖြစ်သည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ် နှင့်နှစ်သစ်ကူးအရာအလုံးစုံအခမဲ့စတင်ရန်အိမ်တော်ကိုစံနမူနာထားခဲ့ပါ။ ဤကြီးစွာသောသန့်ရှင်းရေးကိုခေါ်သည် oosouji ဒါ့အပြင်ဒီနှစ်အတွင်းရေခဲသေတ္တာအောက်ရှိကြမ်းခင်းနှင့်တူသောအိမ်များကိုပိတ်ထားရန်မလွယ်ကူပါ။ ထိုအိမ်တွင်ကလေးများရှိပါကထုံးစံရှိသည် သူတို့ကိုပိုက်ဆံပေးပါ စာအိတ်၌တည်၏။ ဒါကိုခေါ်တယ် otoshidama.
အကယ်၍ သင်လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုရင်လူအများစုကစတိုးဆိုင်များကိုချဉ်းကပ်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အိတ်အချို့ကို ၀ ယ်ကြသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့ကအတွင်းပိုင်းဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ အဲဒါကခေါ်တဲ့ဒီထုံးစံရဲ့အံ့သြစရာတစ်ခုပါ fukubukuroအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အိတ်တွေပါ၊ သူတို့ဟာအရမ်းလူကြိုက်များတာကြောင့်ပျံသန်းတာဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူများစွာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခြင်း ဒီဇင်ဘာလ၏နောက်ဆုံးအပတ်နှင့်ဇန်နဝါရီလ၏ပထမအပတ်တွင်လှည့်ပတ်သွားရန်အခက်အခဲရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သွားလျှင်အကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာသင်တစ်နေရာတည်းတွင်နေပြီးပျော်ရွှင်မှုခံစားရရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့မိသားစုများသို့သွားရောက်မည့်သူများနှင့်အတူရထားများ၊ လေဆိပ်များနှင့်ဘတ်စ်ကားများပေါက်ကွဲသွားခြင်းကြောင့်မလှုပ်မရှားမလှုပ်ရှားပါနှင့်။ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်မှ ၅ ရက်အကြား၊
ဒါ့အပြင်ယေဘူယျအားဖြင့်သင်မြင်ရလိမ့်မယ် စျေးဆိုင်များ၊ ဘဏ်များနှင့်ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များစသည်တို့သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်အကြားနီးကပ်စွာတည်ရှိသည်ဒါဆိုမင်းလုပ်နိုင်တာကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ ပြတိုက်အကြောင်းကိုမေ့, ဒါပေမယ့်ပြန်၌သင်ရှိသည် အားလုံးဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားကျောင်းဖွင့်လှစ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဆိုင်များပိတ်ထားသဖြင့်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်ချွင်းချက်မရှိစည်းမျဉ်းတစ်ခုသာဖြစ်တော့သည်။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူတူပင်အချို့မှာနှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင်အထူး menu များဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ခရီးသွားည့်အနေနှင့်နှစ်သစ်ကူးညသည်တိုကျို Skytree တွင်ညစာစားရန်သွားပြီးနောက် Shibuya ရှိလူကြိုက်များသောပွဲတော်များကိုပျော်မွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကလာမယ့်နှစ်အတွက်ကျွန်တော့်အစီအစဉ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဂျပန် » ဂျပန်ရိုးရာ
Hayedo က de Otzarreta